ज्ञानेन्द्र शा’हीमाथि आ’क्रमण भएपछि किन चु*प योगेश भट्टराई ? – Life Nepali
ज्ञानेन्द्र शा’हीमाथि आ’क्रमण भएपछि किन चु*प योगेश भट्टराई ?
काठमाडौं, । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शा*हीमाथि आज चितवनमा नि*र्घात कु*टपिट भएको छ । नेकपाका कार्य’कर्ताहरुले उनीमाथि सां*घातिक ह*मला गरेको आ*रोप लागेको छ । नेकपाका कार्यकर्ताले नै शाहीमा’थि हा*तपा*त गरेको हो कि होईनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छैन् । तर, चितवन प्रहरीले शा*हीमा*थिको कु*टपि*टमा संलग्नताको आ*शंका*मा एक जनालाई प*क्रउा गरेको छ । शा*हीमा*थि स*त्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले नै हा*तपात गर्नुको कारण के होला ?
भनेर प्रश्न गर्ने हो भने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र शाहीबीच हालै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा वि*वाद भएको थियो । मन्त्री भट्टराईमाथि शा*हीले अ*पशब्द बोलेको र अ*पमान गरेको नेकपाका भा*तृ संग*ठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । कतिसम्म भने शा*हीमाथि यु*वा संघले त विभिन्न जिल्लामा प्रवेश नि’षेध अर्थात प्रति*बन्धसमेत लगाएको थियो । आज शाहीमाथि भरतपुरको चौविसकोठीमा नेपालका लागि नेपाली अभियानले आयोजना गर्न लागेको का’र्यक्रम बि’थोलिएपछि आफू बसेको होटलबाट बाहिरिने क्र’ममा दि’उँसो आ*क्रमण भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरको होटल ग्लो*वलबाट बाहिरिने क्र*ममा बा३ख ८४५८ नंको माइक्रोबसमा आ*क्रमण भएको हो । युवा स’मूहले ढु*ङ्गा, र*ड, ला*ठी प्र*हार ग*री मा*इक्रोब*सभित्र रहेका शाहीसहितको स*मूहमाथि आ*क्रमण गरेको हो । यो प्रकरणमा मन्त्री भट्टराईले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । उनी यतिवेला विदेशमा छन् । तर, उनको फेशबुक पेज अहिलेपनि सक्रिय छ । उनले विभिन्न पोष्ट गरेका छन् । तर, शाही*माथि भएको कु*टपि*टको बा*रेमा उनले अहिलेसम्म एक श*ब्दपनि बोलेका छैनन् । बरु, कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले शा*हीमा*थिको हम*लालाई का*यरताको सं*ज्ञा दिएका छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार घा*इते शा*ही चितवन मेडिकल कलेजको उपचारपछि काठमाडौँ ल्याईएको छ । तर, शाहीको अवस्था ख’तरामु*क्त रहेको मल्लले जानकारी दिएका छन् । शा*हीले काठमाडौँको अस्पतालमा उपचार गर्न चाहेकोले नै उनलाई यहाँ ल्याईएको बताइएको छ । उनको खु*ट्टामा चो*ट लागेको छ भने टाउ*को र श*रीरमा स*मस्या छ । आक्र*मणमा घा*इते भएका अन्य दुईको चितवन मेडिकल कलेजमा उ’पचार भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए । प्रहरी उपरीक्षक म’ल्लका अनुसार सो क्र*ममा आ*क्रमण गर्ने एक जनालाई प*क्राउ गरिएको छ । शा*हीमाथि आ*क्रमण भएको खबर पाउनासाथ उद्धार गरिएको प्रहरी उपरीक्षक मल्लको भनाइ छ । त्यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० निकट युवाहरुले चौविसकोठीमा शाहीले सम्बोधन गर्ने गरी गर्न लागिएको कार्यक्रम बिथोलेका थिए । झ*डप हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले पनि कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए ।
Previous भाइलाई आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रपतिको द’वाब, !
Next फेसबुकमा मेयर रेनु दाहाललाई ज*थाभावी ले*ख्ने प;क्राउ